ရန်ကုန်နဲ့ အနီးဆုံး အပန်းဖြေကမ်းခြေအတု
ပို့စ်တင်ချိန် - 4/05/2014 09:06:00 AM
ဒီတစ်ပတ်အားလပ်ရက်မှာ ရန်ကုန်မြို့ကနေ နာရီပိုင်းလောက်သွားရုံနဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုရဲ့အရသာမျိုးနဲ့ အပန်းဖြေနိုင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ညွှန်ပြချင်ပါတယ်။
ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး ညောင်တုန်းမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ညောင်ချောင်းသာ(ခေါ်)ရန်ကင်း သာအပန်းဖြေနေရာလေးပါ။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ သိပ်မဝေးလှဘဲ ထူး ဆန်းပြီးသဘာဝအလျောက်ဖြစ် ပေါ်နေတဲ့ အပန်းဖြေနေရာတစ် ခုကို ခံစားရမှာပါ။
ဧရာဝတီမြစ်ရဲ့ မြစ်လက် တက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပန်းလှိုင်မြစ်ထဲ မှာ နွေရာသီရေကျချိန် ပေါ်လာ စမြဲဖြစ်တဲ့ သဲသောင်ပြင်ကြီးကို အပန်းဖြေနေရာ တစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ထားပြီး အဲဒီနေရာကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ခန့်ကစပြီး လာ ရောက်အပန်းဖြေသူများလာခဲ့ပါ တယ်။
ရန်ကုန်မှ သွားမယ်ဆိုရင် သိပ်မဝေးဘဲ ညောင်တုန်းကို ကားနဲ့ နှစ်နာရီခန့်သာမောင်းရပါ တယ်။ ညောင်တုန်းရောက်ပြီဆို တာနဲ့ ညောင်ချောင်းသာကို မသိ တဲ့လူက ရှားပါတယ်။
ရန်ကုန်ကနေဆိုရင် ညောင် ချောင်းသာအရောက်ကို ၃၅ မိုင် ဝေးတာကြောင့် မနက်စောစော ၆ နာရီလောက်သွားမယ်ဆိုရင် ၈ နာရီလောက်ရောက်နိုင်ပြီး အသွားအပြန် လေးနာရီခန့်သာကြာနိုင်မှာပါ။
ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ သွားရောက် မယ့်သူတွေအတွက် ရန်ကင်းသာ ကမ်းခြေမှာ ကားပါကင် လုံလုံ လောက်လောက်ကိုလည်း စီမံ ပေးထားပါတယ်။
လိုင်းကားနဲ့ သွားသူတွေ ကတော့ လှိုင်သာယာ ဒဂုံဧရာ အဝေးပြေးဝင်းကနေ ညောင်တုန်း ကိုသွားတဲ့ လိုင်းကားများစွာရှိပြီး ညောင်တုန်းမြို့ ရောက်တာနဲ့ အပန်းဖြေနေရာရှိတဲ့ ရန်ကင်းစံ သာကျေးရွာကိုသွားဖို့ သိပ်မဝေး တော့ပါဘူး။
ညောင်တုန်းမြို့ကို ရောက် တာနဲ့ ညောင်ချောင်းသာကမ်းခြေကိုသွားဖို့ ကားနဲ့ ၁၅ မိနစ် လောက် ဆက်မောင်းရပြီး မြို့ထဲ ကိုဝင်တာနဲ့ ကမ်းခြေရှိတဲ့ နေရာကို ညွှန်ပြထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် တွေကို နေရာအနှံ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ စုပြီးသွားမယ်ဆိုရင် ကားငှားရမ်းခမှာ လိုက်ထရပ်တစ် စီးကို ကျပ်သုံးသောင်းမှ လေး သောင်းခန့်ပေးရပါလိမ့်မယ်။
ညောင်ချောင်းသာကမ်းခြေ ကိုရောက်တာနဲ့ ထူးဆန်းစွာ သဘာဝအလျောက်ဖြစ်ပေါ်နေ တဲ့ သဲသောင်ပြင်ကြီးပေါ်မှာ ထီး အမိုးများ၊ ထိုင်ခုံများနဲ့ လူအများ အပန်းဖြေနေတာကို မြင်တွေ့ရ မှာပါ။
ထီးအမိုးတွေ အောက်မှာ ထိုင်နေသူတွေသာမက ကမ်းခြေ သဖွယ်ဖြစ်နေတဲ့ သောင်ခြေစပ်မှ မြစ်ထဲကိုဆင်းပြီးရေဆော့ကစားနေသူများကို ပျော်ရွှင်ဖွယ်မြင် တွေ့မှာပါ။
ရေကစားနိုင်တဲ့ ကမ်းခြေ အရှည်က မိုင်ဝက်လောက်ရှည် ပြီး ကမ်းခြေမှာတော့ အပေါင်း အသင်း သူငယ်ချင်းတွေစု လာ သူတွေကို အများဆုံးတွေ့ရပြီး မိသားစုလိုက် လာရောက်သူတွေ ကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
မြစ်ထဲဆင်းပြီးရေကစားနိုင် သလို ရေထဲမှာလည်း လှေစီးတာ၊ ဘောကွင်းစီးတာ၊ ရေလယ်စား သောက်ဆိုင်မှာ အပန်းဖြေစား သောက်နိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ လည်းရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ ရေကစား သူများအတွက် ဘောကွင်းငှား ရမ်းခ ကျပ် ၅၀၀ သတ်မှတ်ထား ပြီး လှေစီးချင်သူများအတွက် လှေတစ်စီးကို ကျပ် ၁,၀၀၀ နှုန်း သတ်မှတ်ထားကာ ကမ်းခြေတစ် ပတ်စီးနိုင်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနေချင် သူတွေကတော့ ရေလယ်စား သောက်ဆိုင်မှာ အခန်းငှားရမ်းပြီး ဆိုင်မှာရတဲ့ တရုတ်စာ၊ ဗမာ ထမင်းဟင်းနဲ့ သောက်စရာ အဖျော်ယမကာအချို့ကိုလည်း မှာယူသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ရေလယ်စားသောက်ဆိုင်မှ စီစဉ်ပေးသော သီးသန့်ခန်းကို လည်း တစ်နာရီ ကျပ် ၄,၀၀၀ နဲ့ ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ ညအိပ် ညနေ နေလိုသူတွေအတွက် ကမ်း ခြေတစ်လျှောက်ရှိ ဆိုင်များမှ အခန်းတွေကို သင့်လျော်သလို ဈေးနှုန်းညှိနှိုင်း ငှားရမ်းနိုင်ပေမယ့် ညအိပ်နေသူရှားပါးတယ်လို့ ဆိုင် ခန်းဖွင့်ထားတဲ့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ရေထဲမဆင်းချင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့တော့ သဲသောင်ပြင်ပေါ် မှာဖွင့်ထားတဲ့ ဈေးဆိုင်ခန်းများမှ ဒေသထွက်အစားအသောက်များ၊ အမှတ်တရအင်္ကျီများ၊ လက် ဆောင်ပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ မှာ လည်ပတ်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါ တယ်။
ညောင်တုန်းမြို့ရဲ့ ဒေသ အစားအသောက်ကတော့ ငှက် ပျောခြောက်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဇလွန်မြို့နဲ့လည်း သိပ် မဝေးတာကြောင့် ဇလွန်ဒေသ ထွက် ဂျင်းသုပ်ကောင်းကောင်း ကိုလည်း ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပါ။
ကမ်းစပ်မှာ ထီးနဲ့ နေရာ ထိုင်ခင်းငှားရမ်းမယ်ဆိုရင် ကျပ် ၂,၀၀၀၊ ၃,၀၀၀ ဝန်းကျင်ပေးရ ပြီး ကမ်းစပ်မှာ အုန်းစိမ်းရည် သောက်၊ အကင်စားပြီး တကယ် ကို ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်ခုရဲ့ အရသာလိုမျိုးခံစားနိုင်မှာပါ။
အုန်စိမ်းရည်ရောင်းချသူ တွေ၊ ငါးကင်၊ ကြက်ကင်၊ ပုစွန် ကင်ရောင်းချသူတွေနဲ့စည်ကား နေတာကြောင့် ငွေဆောင်၊ ချောင်းသာကဲ့သို့ ပင်လယ်ကမ်း ခြေသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အချိန်မပေးနိုင်သူတွေအတွက် ညောင်ချောင်းသာက သွားသင့် တဲ့ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမ်းခြေမှာ ကလေးကစားကွင်းငယ်တစ်ခုရှိပြီး ရေစပ်ကိုမဆင်းဘဲ သဲသောင်ပေါ်မှာ ဆော့ကစားချင်တဲ့ ကလေးငယ်တွေအတွက် အထူးအဆင်ပြေလှပါတယ်။
ကလေးကစားကွင်းငယ်မှာ ကလေးငယ်တွေအတွက် စီမံထား တဲ့ ပျော့ပျော့အိအိ ကစားကွင်း ငယ်နဲ့ အပျော်တမ်းသေနတ်ပစ်၊ ပူဖောင်းပစ်၊ အမှတ်တရဓာတ်ပုံ ရိုက်တာတွေ လုပ်နိုင်မှာပါ။
အပန်းဖြေသွားသူများ အတွက် မှာချင်တာကတော့ နွေ ရာသီပူပြင်းတဲ့အချိန်မှာ ရေထဲ ဆင်းပြီးမကစားဖို့ အကြံပြုချင်ပါ တယ်။
မြစ်ရေ ဖြစ်တာကြောင့် ရေထဲကို ဆင်းတဲ့အခါမှာလည်း သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုကျော် ပြီး ဆော့ကစားတာ၊ အရက်သေ စာသောက်စားပြီး ရေကစားတာ တို့ကို ရှောင်ရှားဖို့လည်း အကြံပြု ချင်ပါတယ်။
ခရီးက နေ့ချင်းပြန်ဖြစ်တာ ကြောင့် အနည်းငယ်ပင်ပန်းနိုင် သော်လည်း သွားရောက်သူများ ထူးဆန်းသောဒေသန္တရဗဟုသုတ တစ်ခုရရှိနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပိတ်ရက် မှာ မိသားစုလိုက်သော်လည်း ကောင်း၊ အပေါင်းအသင်းများစု ၍သော်လည်းကောင်း အပန်းဖြေ သွားရောက်သင့်တဲ့နေရာကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Xbox Live အကောင့်ကို ဟက်နိုင်ခဲ့တဲ့ San Diego မြို...
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာ သမ္မတ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လြုံ...
သင်္ကြန်မှာ အနုပညာရှင်တွေ ဘယ်မဏ္ဍပ်မှာ ရှိနေမလဲ
သံလွင်အနောက်ကမ်းကူးသည့် ဝ တပ်ဖွဲ့ နှင့် RCSS/SSA တ...
မီးရထားလမ်းတွင် အိပ်နေသဖြင့် ရထားကြိတ်ခံခဲ့ရပြီး အ...
မိမိကိုယ်မိမိ Selfie ရိုက်သူ - ယဉ်ယဉ်လေး ရူးနေသူများ
လျှပ်စစ်စွမ်းအင်၊ ဓာတ်အားခ နှင့် ပြည်သူ့ခံစားချက်များ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှားလေယာဉ်ရှာဖွေရေး အရှိန်အမြင...
နှစ်ဆခွဲခန့် များပြားလာသော ၂၀၁၄ စင်ကာပူ မြန်မာများ...
မြန်မာအသင်း မလေးရှားအသင်းကို ခြေစွမ်းပြ အနိုင်ရ
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် selfie ရိုက်ပြီး ပို့စ်မလုပ်သင့်တဲ...
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း အိတ်ဇောသံဆူညံသည့်ဆိုင်ကယ်များ အသိမ...
ရွှေဘုတ်ပြောတဲ့ ကျေးလက်က ကျောမွဲတွေ အကြောင်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လုံခြုံရေး စိတ်မချရသော်လည်း နိ...
မြောက်ကိုရီးယားမှ ဒုံးကျည်များ အသစ်ထပ်မံ ပစ်ခတ်ခဲ့...
ပါးစပ်ထဲမှာ သားသမီးကို ထွေးပွေ့ပေးတဲ့ ငါးဖေဖေ
သမီးလေးကို ရွှေလက်တွဲလို့ ကော်ဇောမှာ လမ်းလျှောက်ချင...
လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မြို့မဈေးအတွင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွာ...
အကြမ်းဖက် သတင်းများကြောင့် စစ်တွေမြို့တွင် လုံခြုံ...
နိုင်ငံ့လုံခြုံရေးနှင့် အမျိုးသားရေးဆိုင်ရာ ပြဿနြာ...
စမတ်ဖုန်းတွေထဲက အမာဆုံးဖုန်း ဘယ်ဖုန်းပါလဲ ?
ကျိုက်ထီးရိုးစေတီကို ကေဘယ်လ်ကား ပြေးဆွဲဖို့ မူအာြး...
မြန်မာ၁၀၀ကျော် ထိုင်းတွင် အဖမ်းခံရ
အကြမ်းဖက် သံသယရှိသူများကို ရက်စက်စွာ စစ်မေးသည့် စီ...
ဧရာဝတီ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက် ခိုအောင်းနေသည့် ခိုး၊...
ယောက်ဖအသတ်ခံရမှု သွားကြည့်သူ လူငယ်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ေ...
တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်ရေး ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့်...
Selena Gomez ရဲ့ ဒေါ်လာ ၃ သန်းတန် စံအိမ်ထဲ ကျူးကျော...
လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ ဓားပြမှုနှင့် လုယက်မှုများ အစိုး...
အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတာ ဘာလဲ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ န...
မြို့ပတ်ရထားစက်ခေါင်းများတွင် ခြေရာခံ GPS စနစ် တပ်...
ချင်း တိုင်း ရင်း သား တို့ ၏ ရိုး ရာ ပုံ ပြင် - လိ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ် သမ္မတများနှင့်ေ...
ပူအိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်သော အလှအပ ပြဿနာများကိုေ...
လက်သည်းအလှ ပြုပြင်ခြင်း နောက်ကွယ်မှ အန္တရာယ်များ
ရက်ရှည်ချောင်းဆိုးခြင်းကို ကုသမှုမခံပါက နောက်ဆက်တွဲ...
တောင်ကိုရီးယား ရေပိုင်နက် အနီးမှာ မြောက်ကိုရီးယား ...
လှည်းကူး ရန်ပွဲ ၉ ဦးဒဏ်ရာရ
Newborn baby and Water ကလေးကို ရေဘယ်တော့တိုက်မလဲ
မြန်မာ့အခြေအနေ အပေါ် လူများစု အကောင်းမြင်
မျိုးသိန်းအီလက်ထရောနစ်ဂိုဒေါင်ကို တာဝန်ရှိသူများက ...
ဦးသန့် အမှတ်တရ ငြိမ်းချမ်းရေးကျောက်တိုင် စတင်ဖွင့...
Newborn baby ကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုရင်
ပန်းချီဆရာ သမ္မတဟောင်း George Bush
ပျောက်ဆုံးလေယာဉ် Black Box ရေအောက်မှာ စတင်ရှာဖွေ
ဘင်္ဂါလီကျေးရွာနှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် သန်းခေါင်စ...
စစ်တွေ ပဋိပက္ခအတွက် မသင်္ကာသူ ၁၂ ဦး ဖမ်းဆီး
Pregnancy and Bleeding During Early Stage ကိုယ်ဝန်...
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး...
ရွှေလုပ်သားငါးရာကျော် စဉ့်ကူးမှာ ဒုတိယမြောက်နေ့ ဆက်...
အလွတ်ကျက်ပညာရေးကို ဦးစားမပေးဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စြု...
အစိုးရက မီတာခ တိုးမြှင့်ပြီးနောက် အခြေခံစားသောက်ကု...
မြေမြုပ်မိုင်း အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ တနိုင်ငံလုံး အ...
လှည်းကူးမြို့မှာ ညမထွက်ရ အမိန့်ပုဒ်မ ၁၈၈ ထုတ်ပြန်